YEYINTNGE(CANADA): Saturday, January 09
Gaining work experience not always simple for refugee claimants
refugeeclaimantsတင်ထားချိန်တွင်Social warefare officeမှအနည်းဆုံးတနှစ်ခန့်.တလကိုကနေဒါဒေါ်လာ
Fear of opinion အပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ထိုသူသည်Home Safeမဖြစ်သူတဦးဟုယူဆခြင်းခံရပါက
Landed immigrant ရနိုင်သည့်နည်းပေါင်းမျိုးစုံရှိသော်ငြားလည်းတခုနှင့်တခုရောထွေးလို့မရပါ။ကနေဒါသည်အင်္ဂလန်၊
January 04, 2010 2:03 p.m.
Q. I amarefugee claimant. While I was waiting for my refugee hearing, I got one year of full-time work experience withawork permit. I've just completed my first semester inacivil engineering program inacollege withastudy permit. I also have an international engineering degree. I asked CIC: “Does the work experience I gained in Canada while waiting foradecision on my application asarefugee make me eligible to apply for permanent residence under the Canadian Experience Class (CEC) or under the Federal Skilled Workers Class?” They answered “No.”
I think this is not fair. What is the difference between the work experience I gained asarefugee withawork permit and the experience gained byatemporary foreign worker? I'm working hard and paying all my taxes too. I think there are so many people like me in Canada.
A. I am glad that you asked this question because so many people pin their hopes of becomingaCanadian permanent resident on the experience they gleaned while in Canada. As your question points out, this is not so simple.
To be eligible for the CEC, the applicant must have had temporary resident status during the period of work which qualifies them for the program.
Refugee claimants in Canada who are awaiting their claims to be determined often cannot survive in Canada without working. Accordingly, our immigration regulations allow the issuance ofawork permit to them if they can prove that they cannot support themselves without working. However, the regulations specifically state that the issuance of suchadocument does not confer lawful temporary resident status on the holder. In fact, such work permits specifically state that they “do not confer status.”
A refugee claimant who holds suchawork permit does not have lawful status in Canada by virtue of that document. They are considered to be here without status. Accordingly, the work experience they gain while onarefugee’s work permit will not count for the purposes of the CEC.
In contrast, the Immigration and Refugee Protection Regulations provide that an applicant under the Federal Skilled Worker category is eligible to claim five “adaptability” points for having engaged “in at least one year of full-time work in Canada underawork permit.” This provision does not mention anything about temporary resident status. Accordingly, the experience acquired underarefugee work permit would count towards the adaptability points under the Federal Skilled Worker Class. So, it would seem that the information you received from CIC in this connection is wrong.
Fromapractical point of view, there is obviously no qualitative difference in work experience gained in Canada asarefugee or under some other status.
Nonetheless, our regulations treat this experience differently under these two separate immigration streams.
Notice - January 4, 2010, 2:04 p.m. EST: This isarevised version of an article that was posted earlier today.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/09/20100အကြံပြုခြင်း
December 14, 2009 5:00 a.m.
Ex-N.L. cabinet minister Jim Walsh gets 22 months in jail in spending scandal
January 06, 2010 5:27 p.m.
ST. JOHN'S, N.L. - Bankrupt and with his reputation in ruins,aonce prominent Newfoundland and Labrador politician was led from court in handcuffs to starta22-month jail term for fraud.
Former Liberal cabinet minister Jim Walsh was sentenced Wednesday and ordered to repay $144,000 for his role in the province's constituency allowance spending scandal.
The sentence of 22 months for fraud over $5,000 and one year for breach of trust, to be served concurrently, didn't play the middle ground. The prosecution had requested at least 18 months in jail, while the defence argued for six to nine months.
Walsh "abused his position" asaprivileged politician and used it for his own benefit rather than the public good, provincial court Judge David Orr said.
"He has never taken responsibility for his actions."
Walsh was convicted last month of overspending his constituency allowance by $159,317 between 1999 and 2004. He was acquitted onacharge of influence peddling after Orr citedalack of credible evidence.
Defrauding the government, the judge said, is equivalent to stealing from citizens.
Walsh is among four former politicians from all parties to be ensnared inascheme that shook political foundations in the province.
In 2006, the provincial auditor general raised alarms about spending by the four men from their taxpayer-funded constituency allowances. The claims in question totalled about $1 million. Such funds are meant for expenses such as office rentals, supplies and miscellaneous costs.
Walsh had steadfastly refused to admit any wrongdoing until Wednesday. Asked if he wanted to sayafew words before sentencing, he quoted his family's Latin motto.
It translates as: "Wounded, but not dead."
"Clearly, I have been wounded by this process," said Walsh, 60, who has declared bankruptcy as he repays the money he owes using pension deductions of $2,500amonth.
Most of his trouble "may be self-inflicted," Walsh offered as he apologized to anyone he hurt. He expressed "heartfelt regrets" to those who may have been offended by his actions and thanked his supporters.
Crown attorney Frances Knickle had described Walsh's attitude in court asacourteous but patronizing refusal to fully admit fault. She said outside court that his sentence is another crucial step toward restoring public faith in government -asystem that depends on the integrity of elected officials.
Walsh's defence lawyer, Vernon French, declined comment after sentencing. He told the court earlier that his client has already repaid about $40,000.
Walsh's finances are in tatters, his reputation is ruined and his family has suffered, French said.
French stressed that his client co-operated throughouta27-day trial, providing bank documents and cheques to "move this matter along."
Walsh, former Liberal cabinet minister Wally Andersen, former Conservative leader and cabinet minister Ed Byrne and former NDP member Randy Collins have been convicted since the provincial auditor general first raised his concerns.
Andersen and Byrne were sentenced to 15 months and two years lessaday in jail, respectively. Collins is to be sentenced Jan. 15.
"I thinkalesson has been learned by politicians," French said.
In 2006, Premier Danny Williams launchedareview of spending that found "broad-based systemic failure" in financial controls at the legislature.
The 1,300-page report led by Chief Justice Derek Green made 80 recommendations for sweeping change.
Known as the Green Report, it cited poor training andapolitical culture that hampered accountability.
Government officials now refer to binders of rules to govern constituency spending. As well, itemized expenses claimed by politicians are posted online every three months.
Bill Murray - the legislature's former director of financial operations and lone bureaucrat charged in the scandal - is to appear in Newfoundland's Supreme Court on Jan. 26.
He was suspended from his duties in 2006 and faces charges of influence peddling, fraud over $5,000 and breach of trust byapublic officer.
St. John's businessman John Hand has also been charged with fraud over $5,000, influence peddling and breach of probation.
News from ©The Canadian Press, 2010
9 Jan 2010 ဒိုင်ယာရီ
ဇောတိကသဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ထိုင်းနိုင်ငံစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၁ဝဝဝ)ကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာချုပ်ဆိုပြီးဝယ်ယူမည်ဟုဆို
ဇန်နဝါရီ ၉ ၊၂၀၁၀။
နိုင်ပွန်းဟန်(ဇန်နဝါရီ- ၉)။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဇောတိကသဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၁ဝဝဝ) ကျော် တန်ဖိုးရှိသော နားလည်မှုစာချွန်လွှာချုပ်ဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံ ဇောတိက သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ ထိုင်းမှဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းသတင်းစာမှ ဖော်ပြချက်များ အရ သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြည့်တင်းရေး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဇောတိက သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွင်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဝယ်ယူရန်အတွက် (မြန်မာနိုင်ငံနှင့်) နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးရန် ခွင့်ပြုချက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဓိကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ PTT Group ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းသတင်းများတွင် ဖော်ပြချက်ကို ကိုးကား၍ မြန်မာနိုင်ငံထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်မှာလည်း ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
ယင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ တန်ဖိုးပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလျံကျော်ရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံစွမ်းအင် ဝန်ကြီး Wannarat Charnnukul ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဇောတိကသဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တစ်နေ့လျှင် ကုဗပေသန်း ၃ဝဝ ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းတစ်နေ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှ ကုဗပေသန်း ၂၄ဝ ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ကုဗပေသန်း ၆ဝ လောက် ကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲသွားမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၄င်းဇောတိက သဘာဝဓာတ်ငွေ့အား ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောင်းမည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ( ERI )စီမံကိန်းဆိုင်ရာတာဝန်ခံ ကိုနိုင်ထူးက သူ့ရဲ့သဘောထားကို အခုလိုပြောပါ သည်။
“ ဒီသဘာဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းက ပြည်တွင်းအတွက်အသုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တားမြစ်စရာ ဘာမှမရှိ ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာမီးလင်းဖို့ ပြည်တွင်းပြည်သူပြည်သားတွေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘာမှကန့် ကွက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်အခြေအနေတစ်ခုထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ဒေသခံ တွေမထိခိုက်ဖို့နော်။ ဒီသဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေက ထိုင်းနိုင်ငံကိုအများကြီးရောင်းပြီး ပြည်တွင်းကိုနည်းနည်းပဲပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအများကြီးရောင်းတဲ့ငွေတွေက ရတဲ့ငွေတွေက အစိုးရကဘယ်မှာ ပြန်သုံးမယ်။ အစိုးရက ဒီပြည်သူရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေထဲပြန်ဝင်ပါ့မလား။ အခုလက်ရှိထုတ်ရောင်းနေတဲ့ဟာတွေကလည်း အဲဒီဘဏ္ဍာငွေတွေကလည်း အစိုးရ ဆီပဲသွားတယ်။ လူနည်းစုဆီမှာပဲသွားတယ်။ ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်း အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့အတွက် ကြောင့် အခုဒီထုတ်လုပ်နေတဲ့ဇောတိက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကလည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကျိုး အမြတ်တွေကျတော့ ပြည်သူပြည်သားတွေစံစားရပါ့ မလားပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။ ကန့်ကွက်စရာမရှိသည့်တိုင်းအောင် ဒီစီမံကိန်းလုပ်တယ် ဆိုရင် ဒီစီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးတွေကို အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ ချိုးဖောက်မှုမရှိစေဖို့ အတွက် ကြိုးစားရှောင်တိမ်း ရမှာပေါ့နော်။ သူတို့အတွက် မဖြစ်စေပဲနဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဖြစ်စေဖို့ အဲဒါ တွေအစိုးရတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”
ထိုင်းနိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲ မှု မြင့်တက်လာမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ယင်းကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံမှသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ဝယ်ယူရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများအပြား ပြုလုပ်ထားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၄င်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို တခြားသောနိုင်ငံသို့ ထုတ်ရောင်း မှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးခံစားရမှုရှိ မရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်၍ ၄င်း၏အမြင်ကို ယခုလိုပြောပြခဲ့ပါသည်။
“ ကျွန်တော်တို့မြင်တာက ဒီအရင်းအနှီးမြုပ်နှံမှုအသစ်တွေက ပြည်သူတွေက ဒီစစ်တပ်တို့ရဲ့အနေအထားကိုလည်း သိထားပြီးပြီး သူတို့ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြည်သူအကျိုးမဖြစ်ဘူး။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြင်တာက အခုစီမံကိန်းအသစ် တွေ အဲဒါတွေက လာလုပ်မယ့်ကုမ္ပဏီတွေ လာလုပ်မယ့်သူတွေက အဲဒါတွေသူတို့စဉ်စားသင့်တယ်။ သူတို့လုပ်မယ် ဆိုရင် အဲဒီအနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ပါ့မလား။ ဆိုးကျိုးမှုတွေဖြစ်စေမလား။ အဲဒါတွေဆိုးကျိုးမှု တွေက ကောင်းကျိုးထက်ပိုများနေတယ်ဆိုရင် သူတို့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။
လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ မီးအားတို့ ဒီလျှပ်စစ်အားတွေက လုံးဝလုံလောက်မှုမရှိဘူး။ ပြည်တွင်းအတွက် လုံးဝ လုံလောက်မှုမရှိဘူး။ ပြည်ပကိုပဲထုတ်ရောင်းတယ်။ ပြည်ပကထုတ်ရောင်းပြီးတော့ ရတဲ့ငွေတွေကလည်း ပြည်တွင်း ထဲမှာလည်း ပြန်ပြီးတော့အသုံးမဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့မြင်သာက ဒါတော့အကျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ ပြည်သူပြည် သားတွေအကျိုးမဖြစ်ဘူး။ ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သူတို့ဆက်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။”
ဤသဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ ရသောဝင်ငွေနှင့် စစ်အစိုးရတို့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်ကိုင်နေမှုကြောင့် တိုင်းပြည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် နောင်ဖြစ်လာမည့်ဆိုးကျိုးတွေကို ကိုနိုင်ထူးက ယခုလို ဆက်ပြောခဲ့ပါတသည်။
“ ဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲက ဒီရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့စစ်အစိုးရက သူတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကို ဆက်လက် ကိုင်ဆောင်သွားနိုင်မယ်။ ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်း ရေရှည်မှာဆက်လက် ခံစားနေရမှာပဲ။ ကျွန်တော် တို့မြင်တာက မြန်မာပြည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးမှာလည်း တော်တော်လေးကို အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာ ပေါ့နော်။ စစ်အစိုးရက သူတို့ပိုက်ဆံရှိနေသ၍ လက်ဝါးကြီးအုပ်နေသ၍ပေါ့နော် ရလာတဲ့ဓါတ်ငွေ့အတော်တော်များများက စစ်အသုံးစရိတ်ထဲမှာပဲ သူတို့အသုံးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ တော်တော်လေးနှောင့် နှေးနေတာ ပေါ့နော်။ ရလာတဲ့ပိုက်ဆံကလည်း စစ်တပ်အတွက် သူတို့အာဏာဆက်လက် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လုပ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။”
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီ ၁ဝ ခု ကျော်မှ ရှာဖွေတူး ဖော်လျက် ရှိပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအများစုမှာ သြစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ငွေစုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉ဝဝ ဝန်းကျင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွှတ်တော်ထဲကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ချင်သူ
Saturday, 09 January 2010 18:57 ဧရာဝတီ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည်ဟု ကြေညာထားသော ရန်ကုန် အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေ အား ယင်း ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားအမြင်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ကိုစိုးက ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ကို ဦးသုဝေ က ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း၌ ယခင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က ၀န်ကြီးချုပ်များ ဖြစ်ခဲ့သည့် ဦးနု ၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့၏ သမီးများဖြစ်သော ဒေါ်သန်းသန်းနု၊ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း နှင့် ဒေါ်နေရီဗဆွေ တို့ ဖြင့် ဖွဲစည်းခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခု စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြောင်း သတင်း ထောက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားနေသော ဦးသုဝေ(ယာ) (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဦးသုဝေသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၀ ပြည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ ပါတီ အမည်ဖြင့် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စနစ်တကျ ကျင်းပဖို့ စီမံ ဆောင်ရွက်နေတယ်၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ တရပ်လုံးက မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သ၀ဏ်လွှာမှာ ပြောထားတယ်၊ အဲဒီ အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အကယ်၍သာ သူပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်း ကောင်းတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အခုထက်ထိအောင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးဘူးလေနော်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပေဒေလည်း မထွက်သေးဘူး၊ ပါတီများမှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေလည်း မထွက်သေးဘူး ဆိုတော့ တရားဝင်ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အခါကျတော့ မျှော်လင့်တာပဲ ရှိတယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီတော့ ဖြစ်ဖို့ကောင်းတာကတော့ ဥပဒေကို မြန်မြန်ထုတ်ပေးလို့ရှိရင် အချိန်မီလုပ်နိုင်တာပေါ့၊ အဲ သူတို့ကတော့ စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်တယ်လို့ပဲ ထားဦးတော့ အချိန်မမီရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဘာမှ ဆက်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
မေး။ ။ တချို့က ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ရွေ့သွားနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြတယ်၊ ၂၀၁၀ အတွင်းမှာ လုပ်မယ်ဆိုတာကို သံသယ ရှိနေကြတယ်၊ အဲဒါကိုရော ဘယ်လို ယူဆလဲ။
ဖြေ။ ။ ပထမတုန်းကတော့ ဟိုး ဇူလိုင် သြဂုတ်ကတည်းကပဲ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ထွက်မယ်ထွက်မယ် ဆိုပြီး မျှော်လင့်လာ တာပေါ့နော်၊ အခုတော့ ကျနော်တို့ ကောလာဟလပဲဖြစ်သွားတယ်၊ ကျနော်တို့ကတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာ သတင်းရယ်လို့ မရဘူးလေ၊ ကောလာဟလကတော့ အခု လာမယ့် မတ်လ တော်လှန်ရေးနေ့မှာ ထွက်မယ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်၊ အဲဒီလို ကောလာဟလရှိတာပေါ့နော်။ အင်း ဒါပေမယ့် ပြောင်းသွားနိုင်လား မပြောင်းသွားနိုင်ဘူးလား ဆိုတာကတော့၊ အခုအခြေအနေ အတိုင်း ဆိုတော့ ပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ၊ သူတို့ဘက်က ဘာအခက်ခဲ ရှိလဲဆိုတာကတော့၊ သူတို့ဟာ သူတို့ အခက်ခဲ ရှိလို့ ပြောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။
မေး။ ။ ဦးသုဝေတို့အနေနဲ့ကရော ဒီ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မှု ရှိလား။
ဖြေ။ ။ သူတို့ပြောစကားအရ ကျနော်တို့က လက်ခံပြီးတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားနေ တာပေါ့၊ တကယ်ယုံကြည်လား မယုံကြည်ဘူးလား ဆိုတာကတော့ ဥပဒေ ထွက်လာမှ အသေအချာသိမှာပဲလေ။
မေး။ ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးသုဝေတို့က လူပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်၊ အဲဒါကရော ဘယ်လို လုပ်တာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ လူပ်ရှားမှုဆိုတာကတော့ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာတော့ မရှိဘူးပေါ့၊ ကျနော်တို့ကတော့ ဟို ဘာခေါ်မလဲ ပါတီပဲ ဖွဲ့စည်း ထားလိုက်တယ်လေ၊ ဖွဲ့ခွင့်မရှိသေးဘူးဆိုမယ့် ကိုယ့်ပါတီကို ဖွဲ့စည်းတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့၊ အမျိုး သမီးအဖွဲ့တို့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ တိုင်းအဖွဲ့ စသဖြင့် မြို့နယ်အဖွဲ့တွေလည်းပဲ တတ်နိုင်သလောက်လိုက်လုပ်တာပေါ့၊ သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်ရတာပေါ့နော်၊ ဟို အစည်းအဝေးကြီးတွေဘာညာ ကျင်းပပြီးတော့ လုပ်ရတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ၊ နီးစပ်ရာနီးစပ်ရာ လုပ်ပြီးတော့ အဲဒီလိုပဲ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ စည်းရုံးရေး စလုပ်နေတယ် ဆိုပါတော့၊ အဲဒီလိုလုပ်တာပေါ့။
မေး။ ။ အဲဒီလိုလုပ်ရတာဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြတော့ ဘယ်လိုမျိုး ဆက်ဆံရတာရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော် ထင်တယ်၊ သူတို့ကတော့ ကျနော်တို့ကို စောင့်ကြည့်နေတာပဲနော်၊ နောက်ပြီးတော့လည်းပဲ ကျနော်တို့ လုပ်သမျှ ကို သူတို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ကို အစီရင်ခံနေတယ်လို့ပဲ ယူဆရတယ်။ တခါတခါ လာမေးတယ်လေ ဘာတွေများ လုပ်သလဲ ဆိုပြီးတော့၊ ကျနော်တို့ကလည်း တရားဝင်လိုသဘောမျိုး လုပ်တာပေါ့နော်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ တရားဝင်လို လုပ်တဲ့ အခါ ကြတော့ အမှားမရှိဘူးပေါ့၊ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲ ထင်တယ်။
မေး။ ။ ပြည်တွင်းမှာ အခုလိုမျိုးလှုပ်ရှားသူတချို့ကို အာဏာပိုင်တွေက တရားမ၀င်အဖွဲ့အစည်း ပုဒ်မတွေနဲ့ အရေးယူတာမျိုး ရှိဖူးတော့၊ အဲဒီလိုမျိုးလူပ်ရှားတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲတွေရှိလား၊ ဘယ်လိုမျိုး ကြုံရလဲ။
ဦးသုဝေ (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ ဟိုတုန်းက ရှိတယ်၊ အခုဟာက ဒီလိုလေ၊ ဥပမာ NLDဆိုပါစို့၊ သူတို့ကတော့ တရားဝင်ပါတီကို၊ တရားဝင် ပါတီ ဆိုတော့က သူတို့က နေရာတိုင်းလှုပ်ရှားနိုင်တာပေါ့နော်၊ သူတို့က တချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ ရုံးတွေဘာတွေ အပိတ်ခံရ တယ် ဆိုသော်လည်းပဲ သူတို့က လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်၊ တရားဝင် ပါတီပေါ့နော်၊ နောက်ပြီးတော့လည်း အခမ်းအနားတွေ ဘာတွေ ကြတော့ ဟို ကျွန်တော်တို့ ၀ါရင့်အဖွဲ့ကတော့ သူတို့လည်းပဲ လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ စည်းရုံးရေး လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခမ်းအနား ကျင်းပရုံပဲပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ကလည်း လုပ်နိုင်ဖို့ပေးထားတယ်ဆိုတာ၊ ကျနော်ထင်တာပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ် ဆိုတာကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို နည်းနည်းလွှတ်ထားတယ်လို့ ထင်တာပဲ။
ကျနော်တို့က အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ မြို့နယ်တွေဆင်းပြီးတော့ စည်းရုံးရေး ဆင်းတာပေါ့၊ စည်းရုံရေးလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်၊ သို့သော် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြီး စည်းရုံးရေးဆင်းတယ်လို့၊ ဒီလို ပြောလို့မရဘူးလေ၊ နီးစပ်ရာ နီးစပ်ရာပဲ၊ ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာကို သွားပြီး ဆက်သွယ်တယ်၊ ပြီးရင် လေးငါးယောက်ခေါ်လိုက်၊ လေးငါးယောက်ခေါ်လိုက် အဲဒီလိုလုပ်ရတာပေါ့၊ စလုပ်တာဆိုရင် နှစ်လ၊ သုံးလလောက်ရှိသွားပါပြီ။
လူတွေက ဟိုတုန်းကတော့ အစောပိုင်းကဆိုရင် လူတွေက စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့နော်။ တဘက်ကလည်းပဲ ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်ရှာ နေရတယ်ဆိုတော့၊ နိုင်ငံရေးကိုလည်း ပြတ်နေတာကြာပြီဆိုတော့၊ သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ အခု ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားတာသိလာတဲ့ အခါကြတော့ လူတွေကလည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ကလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့၊ နိုင်ငံရေးကို တော် တော်လေး စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် မကြာသေးခင်က NLDလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးဆိုရင်၊ ၀ါရင့်မှာ လုပ်တဲ့ အစည်း အဝေးတို့ ဆိုရင် အခါတိုင်းလုပ်တာထက် နှစ်ဆလောက်လူတွေက ပိုများလာတယ်၊ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားလာတယ်ပေါ့။
ကျနော်တို့ စည်းရုံးရေးဆင်းသွားတဲ့ အခါမှာလည်းပဲ၊ ကျနော်တို့ကတော့ စောစောကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ရွှေးကောက်ပွဲဝင်မယ်၊ ဘာကြောင့်ဝင်မယ် ဆိုတာတွေကို လုပ်ထားတဲ့ အခါကျတော့၊ အဲဒါတွေကို ရှင်းပြတာ လည်း လူတွေက လက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အများစုက ဘာလဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို စောင့်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့နော်၊ လုပ်တော့လုပ်ချင်တယ်၊ စိတ်လည်းပါတယ်၊ သို့သော်လည်းပဲ ဒီကြားထဲမှာ အလကားနေရင်း အဆွဲခံရမယ်ဆိုတာလည်း မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ ဟို သဘောလည်းတူတယ်၊ လုပ် လည်းလုပ်ချင်တယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေလေးတော့ စောင့်ပါရစေဆိုတဲ့ လူတွေကလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ကတော့ ကျနော်တို့ကို ဆက်ဆံတဲ့သဘောမရှိဘူးဗျ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ လာပြီးတော့ သတင်းယူတာပေါ့၊ အဲဒီအဆင့်ပါပဲ။
ဟိုတခါတုန်းကတော့ သူများလုပ်တဲ့ ပွဲမှာ အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင်နဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လေ၊ အဲဒီတုန်းကတော့ ခေါ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို သတိပေးတာပေါ့၊ ခင်ဗျားတို့ ငါးယောက်ထက်ပိုပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ခွင့်တောင်းရမယ်ပေါ့၊ အဲဒီတုန်းကတော့ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရတာပေါ့။
ကျနော်တို့က ဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့၊ လူနည်းနည်းစီ လုပ်တယ်၊ ငါးယောက် ဆယ်ယောက်ပေါ့၊ တဖြည်းဖြည်း ကျနော်တို့က များ များလုပ်တယ်၊ ကျနော်တို့ ပါတီပွဲတုန်းကဆိုရင် လူများများဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုရင် ကျနော် ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ အဲဒီနေ့ ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ပွဲမှာ ကျနော့်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဘယ်နှနှစ်မြောက် ဆိုပြီးတော့ အဲဒါ ဖိတ်လိုက်တာပေါ့၊ မြို့နယ်တွေမှာလဲ ဒီလိုပေါ့၊ စည်းရုံရေးဆိုပြီးတော့ ဖိတ်တယ်၊ မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့ ဖိတ်တယ်၊ အဲဒါလူများများ လုပ်ရတာပေါ့၊ အဲဒီသဘောမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ လူစုတာပဲ။
မေး။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရတဲ့ ဦးသုဝေတို့ ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကရော ပြောပေးပါလား။
ဖြေ။ ။ ပြောချင်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ အဲဒီအတွက်လည်း ကြေညာစာတမ်းတွေ အများကြီးထွက်ထားတယ်၊ အဓိက ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ၊ နံပါတ်တစ်ကတော့ ကျနော်တို့က အခုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေက ချွတ်ယွင်းချက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်၊ အဲဒါကို ကျနော်တို့က ပြင်ချင်တယ်၊ ပြင်ချင်တယ်ဆိုပေမယ့်၊ ဒီအတိုင်း အပြင်ကနေပြီးတော့ ဟို လှမ်းအော်လို့လည်း မရဘူး၊ ဆန္ဒပြလို့လည်း ဒါတွေက မရဘူးနော်၊ အဲဒီတော့ ပြင်နိုင်တဲ့ နေရာရောက်အောင်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်မယ်၊ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်မယ်ဆိုရင် ပြင်နိုင်တယ်ပေါ့၊ အဲဒါ တချက်ပေါ့နော်။
နံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့ ကျနော်တို့က ယူဆတာကတော့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ တခါမှ မဲမပေးရတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဆိုရင် အသက် ၁၇ နှစ်လောက်ရှိတဲ့တွက် အသက်မပြည့်သေးတော့ မပေးနိုင်ဘူးလေ၊ အဲဒီ လူတွေက အခုအသက် ၄၀ ပြည့်တော့မယ်၊ သူတို့ တခါမှ မဲမပေးဖူးဘူး၊ အဲဒီလူတွေက ဘယ်လောက်လောက် ရှိလဲဆိုရင် လူဦးရေ တ၀က် လောက်ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ လူဦးရေက ၅၆ သန်းဆိုရင် သူတို့က ၂၈ သန်းလောက် ရှိတယ်၊ ဆိုတော့ အဲဒီလူတွေကလည်းပဲ၊ သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာက သူတို့ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမယ့် ပွဲကို၊ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့အာဏာရှိတဲ့ အဖြေကို သူတို့ရဲ့ လက်နဲ့ သူတို့ရဲ့သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ချင်တယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ကလည်း ထုတ်ပြန်တာ ကောင်းတာပေါ့၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဟိုပါတီ ဒီပါတီက ပြောတာပဲ ကြားနေရတယ်၊ အဲဒီလိုပြောတာတွေက မှန်တယ် မှားတယ် ဆိုတာသူတို့ ဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်လေ၊ အဲဒီလို အခွင့်အရေးရအောင် ဒါရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သင့်တယ်၊ နောက်တခုကလည်းပဲ ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရှိရင် သဘောအားဖြင့်တော့ ဒီစစ်အစိုးရ စနစ်ကြီးပျောက် ပြီးတော့ အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ ယူဆတာက။
အဲဒီတော့ အဲဒီ အရပ်သားအစိုးရဟာ ကျနော်တို့ကြိုးစားရင်ပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့လည်း ကြိုးစားရမယ်၊ ပြည်သူကလည်း ထောက်ခံ အားပေးမယ်ဆိုရင် အားကြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ လမ်း ကြောင်းပေါ်ကို မြန်မြန်ရောက်မယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒါပါပဲ။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလိုလေ၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ ကိုယ့်မိသားစုတွေမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ထမင်းအတူတူ လက်ဆုံစားနိုင်ရေးအတွက်ကို ဖြစ်လာအောင် ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်တာပဲ။
မေး။ ။ တချို့ကလည်း ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာ ကြုံနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းအတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တကယ့် အဖြေ မဟုတ်ဘူး၊ ထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေကြတာ ရှိတယ်၊ အဲဒါကို ဦးသုဝေ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ အယူအဆပေါ် မူတည်တာပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ အယူအဆက ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့ရှိရင်ဖြင့် ဘယ်ပေါ် မှာ အယူအဆတွေ ကွဲနေလဲဆိုတော့၊ ဥပမာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေပေါ့နော်၊ အဲဒီဥပဒေထဲမှာကတော့ ဒီမိုကရေစီမကျဘူး ဆိုတာ အဲဒါဟုတ်တယ်၊ ကျနော်တို့လည်း လက်မခံပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေကတော့ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအရ ရွေးကောက် ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာမှထူးလာမယ် မဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့က ယူဆကြတာပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ကတော့ အဲဒီလိုမယူဆဘူး၊ ဒါက တော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာဖို့ လုပ်တယ်ဆိုကတည်းက ကျနော်တို့က ဒီလို၊ ဒီအစိုးရဟာ သူတို့လည်းပဲ ကြိုးစားခဲ့တာပဲ၊ သူတို့ လည်း တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူပဲ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေက စနစ်ကမှားတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ တိုင်းပြည်က အချိန်တွေ အများကြီးနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒါကို ဒီအစိုးရကလည်း သိပါတယ်၊ သူတို့လုပ်တာ၊ ကြိုးစားတယ်၊ ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်ဘူး၊ သူများနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်၊ တိုင်းပြည်လူထုကလည်း သူတို့ကို မကြိုက်ဘူး၊ အဲဒီတော့ သူတို့က ကျနော့်အမြင်ပေါ့၊ ကျနော်တို့ စဉ်းစားတာက သူတို့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ ယူဆမယ်၊ အဲဒီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက ဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ပဲပေါ့နော်၊ တချို့ကပြောတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးရင်လည်းပဲ သူတို့ပဲ အာဏာရလိမ့်မယ်၊ ဟုတ်လား၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရ။
ကျနော့်အမြင်က ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ပြောတာတွေ၊ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေဆွဲတာတွေကိုယ်နှိုက်က သူတို့နောက်ဆုတ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆရတယ်။
တပ်က ရှေ့ကိုတက်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ တပ်နောက်ဆုတ်တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို တပ်တွေက အာဏာယူဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံ ထဲ ပါရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော်တို့အမြင်အရ တပ်ဆိုသည်မှာ တပ်ဦးစီးက ကောင်းလို့ရှိရင် နောက် ဆုတ်ပေမယ့်လို့၊ စနစ်တကျနောက်ဆုတ်ရတာပေါ့ နော်၊ အခု ဒီအစိုးရကလည်းပဲ သူနောက်ဆုတ်တာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို အမှီပြုပြီးတော့ နောက်ဆုတ်နေတာ၊ ကျနော်တို့က သူတို့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာ တက် လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရက စနစ်တကျဝင်ယူရမယ် ဆိုတာပဲ။ ။
Gaining work experience not always simple for refu...
Ex-N.L. cabinet minister Jim Walsh gets 22 months ...